Chii chinonzi 'Sisitimu' Mune Mac Kuchengeta? Hechino Chokwadi uye Maitiro Ekubvisa Izvo! - Mac
chii chinoitwa hdr pane iphone kamera
iphone 6 kamera isiri kushanda mushure mekutsiviwa kwechidzitiro
iphone 6 pamwe nekubata kusashanda mushure mekutsiviwa kwechidzitiro
iphone ramba uchitsvaga mutakuri
Chii chinonzi 'Sisitimu' Mune Mac Kuchengeta? Hechino Chokwadi & Maitiro Ekubvisa Icho!
What Is System Mac Storage
Uri kupererwa nenzvimbo yekuchengetera uye iwe hauzive zvekuita. Wakazviona izvozvo System iri kutora yakawanda yekuchengetedza nzvimbo uye hauna chokwadi nei. Muchinyorwa chino, ndicha tsanangura kuti chii 'Sisitimu' muMac yekuchengetera uye nekukuratidza maitiro ekuibvisa !
Sisitimu muMac Kuchengetedza: Yakatsanangurwa
Iyo 'Sisitimu' muMac yekuchengetera ine kunyanya backups uye akachengetwa mafaera. Yakagadzirirwa kuchengetedza maMac ako mafaera enguva pfupi. Mac yako yekuchengetera nzvimbo inotanga kuzadza nekukurumidza kana ichinge yachengeta boka remafaira enguva pfupi.
Macs zvinobva zvadzima mamwe ma tempile mafaera. Zvisinei, mamwe mafaira asingabatsiri haagone kubviswa, zvichitungamira kune hombe chunk yeSystem muMac kuchengetedza.
Maitiro Ekubvisa Sisitimu Kubva Mac Kuchengeta
Kutanga, tinya pane iyo Apple icon mune yepamusoro kuruboshwe-kona yekona. Wobva wadzvanya Nezve Iyi Mac -> Kuchengeta . Pano iwe unowana chaizvo izvo zviri kutora nzvimbo pane yako Mac. Sezvauri kuona, Sisitimu parizvino inotora 10.84 GB yekuchengetedza.
Unogona kuwana dzimwe nzira dziri nyore dzekuchengetedza Mac yekuchengetedza nzvimbo kana iwe ukabaya Manage . Dzvanya bhatani kurudyi kwekurudziro uye uone kana izvozvo zvichikubatsira kutema pasi paSystem muMac kuchengetedza. Mamwe mashoma emazano aya ingotora kamwe chete!
Imwe nzira yekubvisa System muMac kuchengetedza ndeyekuvaka zvakare iyo Spotlight index pane yako Mac. Kana iwe uchinge uine dzimwe nyaya nekutsvaga kweSpotlight, izvi zvinokubatsira kugadzirisa dambudziko.
Dzvanya paApple icon mune yekumusoro-kuruboshwe kona yekona. Wobva wadzvanya Sarudzo dzeSystem -> Kutaridzika . Pakupedzisira, tinya iyo Kuvanzika Tab.
Tinya bhatani rekuwedzera (+) mukona rezasi reruoko rwehwindo kuti uwedzere mhando dzemafaira iwe aungade ku reindex. Ini ndinokurudzira kusarudza ese faira mhando kana ino inguva yako yekutanga reindexing Kutarisa. Dzvanya Sarudza mukona yepazasi-kurudyi kwehwindo kana iwe uchinge wasarudza mafaera iwe aunoda reindex.
Dzvanya X iri kumusoro kwekuruboshwe-kona kuti usiye Sarudzo dzeSystem. Iyo reindex ichatanga kana iwe wavhara System Sarudzo. Buda Chinyorwa chekutsigira Apple kana iwe uchida rumwe rubatsiro reindexing Kutarisa paMac yako.
Is System Ichiri Kutora Yakakura YeMac Kuchengeta?
Kana dambudziko iri rikaramba riripo, iri zano rakanaka kuti uwane chaizvo zviri kuwira pasi peboka reSystem pane Mac yako. Kumhanya Disk Inventory X kunogona kuita chaizvo izvozvo! Izvo zvinoshandiswa mahara kurodha pasi uye ichakupa zvakadzama kuputsika kwezviri kutora nzvimbo yekuchengetera paMac yako.
Mushure mekurodha pasi zvinoshandiswa, vhura Tsvaga uye tinya Downloads . Tinya kaviri pa Disk Inventory X 1.3 .
Dzvanya iyo Disk Inventory X icon kuvhura zvinoshandiswa. Zvinogoneka kuti Mac yako inokutadzisa kubva kuvhura ichi chishandiso nekuti mushambadzi haigone kuongororwa. Kana iwe ukaona iyi pop-up pane yako Mac, tinya iyo chiratidzo chemubvunzo .
Tevere, tinya Vhura iyo General pane kwandiri .
Pakupedzisira, tinya Vhura Zvisinei kupa Mac yako mvumo yekumhanyisa Disk Inventory X.
iphone 5s kutsvaga sevhisi
Iye zvino zvawakapa mvumo kune Mac yako, vhura Disk Inventory X. Dzvanya System kuti uone chaizvo zviri kutora System yekuchengetedza pane yako Mac.
Kana uchinge waona mamwe mafaera anogona kubviswa, vhura Tsvaga uye tsvaga zita remafaira iwe aunoda kudzima. Dhonza mafaera kumarara kuti uadzime!
Maitiro Ese Akaenda
Tinovimba chinyorwa ichi chakubatsira kugadzirisa dambudziko rekuchengetedza pane yako Mac. Wakawana mhinduro yakasiyana kune iri dambudziko here? Tisiyei mhinduro pasi pazasi!